Yini i-horoscope yangoFebhuwari 1? - Isikhathi Sokuzalwa Komuntu
Yini i-horoscope yangoFebhuwari 1?
Imibuzo Nezimpendulo Ezinhle Kakhulu - Februwari 1 Usuku lokuzalwa komuntu
Sanibonani nonke futhi ngamukelekile kwesinye isigaba sesibikezelo samasonto onke esivela ku-AstrologyAnswers.com, igama lami nginguTerence Guardino. Isonto liqala ngoMsombuluko kuFebhuwari 1.
Ungakhohlwa ukuthi iMercury iphinda ibhale kabusha njengamanje ngoMgqibelo kaJanuwari 30, futhi imvamisa, cishe ezinsukwini ezimbili ngaphambi nangemuva kweMercury iguqula indlela, uzobona ama-glitches amaningi, amaphutha, ukungaqondi kahle, ukulahleka kokhiye bakho, njll. , khumbula, kuzoqhubeka ngqo ngoFebhuwari 20, kodwa asiqale ngoMsombuluko. Yebo, inyanga ikwiLibra, ebeka ithoni kwiLibra yomphakathi ifuna ukuvumelana, ifuna ukuvumelana, empeleni okuhle kakhulu ngale Mercury ebuyiselwe emuva.
Futhi iMercury iyacwila ophawini lwe-Aquarius, okuyisibonakaliso somoya, nenyanga iseLibra - uphawu lomoya - ngakho-ke kukhona ukufana okukhulu phakathi kwengqondo yethu enengqondo, ingqondo yethu engokomzwelo nale nyanga eLibra. Futhi, inyanga iyathandeka kakhulu ebhizinisini leSaturn kuze kube semini, mhlawumbe cishe emini, entambama yasePacific Standard Time. Futhi kusihlwa ngesikhathi esivamile sasePacific, inyanga izobe isizuzisa futhi iJupiter izozizwa sengathi ube nosuku oluhle.
Uzozizwa umuhle ekugcineni kosuku lapho iMercury ibuyiselwa emuva. Kungcono kakhulu, ikakhulukazi ekuqaleni komjikelezo, ukuthi ungaqali amaphrojekthi amasha abalulekile, hhayi ukubiza amakhaza ukuthola ibhizinisi elisha. Mane uqhubeke, uyazi okwenzile, vele uhlale ubukele, noma ubuyele kumaphrojekthi amabhizinisi amadala, amakhasimende amadala bese ubuyela kuwo uphinde uxhumane nawo.
Lokho nje ngeke kusebenze futhi ngokujwayelekile ngeke kuyiwe ebhizinisini elisha ngoLwesibili nenyanga esibonakalisweni somoya seLibra, kuzohambisana nelanga e-Aquarius, ngakho konke kuzohamba kahle, nangoMsombuluko uVenus, le njabulo- ekufuneni ngemuva kweplanethi yezothando ehambisanayo, uVenus uzobe engenile e-Aquarius amasonto ambalwa. U-Aquarius ubusa phezu kwemisebenzi yeqembu lobungani ukuze iVenus e-Aquarius ibe nobungane, ifune ukwenza izinto nabangani bakho, khumbula ukuzihlukanisa nomphakathi. Ubuchwepheshe beMithetho ye-Aquarius, ngakho-ke mhlawumbe iningi lenu lizokwazi ukuthi ungavele usebenzise i-Zoom ne-Skype futhi uxhume cishe kwimicimbi yeqembu.
NgoLwesithathu, manje inyanga izongena eScorpio ngabo-6 ekuseni - 3 ntambama.
Isikhathi esijwayelekile sase-Pacific. ILibra ihlala izama ukushaya umhlaba ophakathi nendawo, uyazi ukuthi bazama ukuba yikho konke abantu abayikho, kepha amandla eScorpio, konke ngandlela thile, um, kungamandla amakhulu kakhulu. Inyanga kuze kufike isikhathi sePacific ekuseni kakhulu izodala iVenus efuna inkanuko ntambama, okuyinselele yeSaturn ebekelwe imigoqo ngokuqapha.
Futhi kusihlwa ngesikhathi sasePacific kuzobe kungokuphikisana noma ukubhekana ne-Uranus engalindelekile, ngakho-ke kuningi ukuguquguquka kwemizwelo, ingcindezi enkulu nengcindezi nengcindezi, hhayi usuku oluhle lwemihlangano, hhayi usuku oluhle lokubalulekile izizathu zomuntu siqu noma zomsebenzi zinezingxoxo ezizama ukuthola isisombululo. NgoLwesine, inyanga iyaqhubeka eScorpio futhi manje isekoneni elinengcindezi elangeni e-Aquarius. Lokhu kungakhipha amaphethini amaningi amadala, futhi ngeScorpio - inyanga eScorpio - kufana namaphethini amadala ajulile impela, anezimpande ezijulile.
Izindaba ezimbi ukuthi le mikhuba namaphethini amadala ayavela. Izindaba ezinhle ukubona lawa maphethini futhi wazi ngokwengeziwe ukuthi ungakushintsha kanjani okuthile. Futhi lapho iMercury iphinda ibhalwa kabusha, kungenzeka, kube khona ulwazi olungelona iqiniso kanye nokungaqondi kahle, kepha ungaphinda uyihlolisise leyo mikhuba emidala bese uyisebenzisa ngezindlela ezintsha.
NgoLwesihlanu, manje inyanga ikuSagittarius izinsuku ezimbalwa, inyanga eScorpio imnyama, icacisa ngokwengeziwe, iyinyanga eyimfihlo futhi engaqondakali eSagittarius. I-Sagittarius inenhlanhla, inethemba, inobudlelwano, futhi iya eSagittarius ngo-9 ekuseni - 5 ntambama
Isikhathi Esivamile sasePacific, kepha njengakuzo zonke lezo zinhlobo zokujabula nokudlala kanye nesifiso sokuphuma sizijabulise. UVenus - uVenus othanda injabulo - ubhangqa kahle noSaturn, okungahle kusho ukuthi ithoni ejwayelekile yomphakathi neNyanga eSagittarius iba nesikhathi esimnandi, singaphandle, sinenjabulo, kepha sisengubhadane futhi sizijabulisa IVenus ishwabene noma yathenwa yiSaturn enomthwalo wemfanelo. Abanye benu bangakhungatheka ikakhulukazi, uyazi, kunguLwesihlanu ebusuku kusondela uMgqibelo futhi ufuna ukuphuma nibe nesikhathi esimnandi, kepha nikhona kodwa nizizwa sengathi kufanele nithwale umthwalo.
Futhi mhlawumbe ufuna ukuphuma uyozijabulisa, kepha abanye abantu abafuni, ngakho-ke ngesikhathi somthwalo ekuhlanganyeleni, kulungile. IVenus yiplanethi yothando, lokho kulungile, lapho ubudlelwano buhlola khona ukuthi bukhona, futhi lapho iMercury ibhalwa kabusha le ndawo kungaba yindawo ongaphinda uye kuyo futhi ube nezingxoxo ezithile ezifudumele zokufuna isixazululo nentethelelo kodwa ngeVenus Saturn kudinga ukuzikhandla okukhulu futhi umthwalo wokuzuza okuningi. NgoMgqibelo inyanga iseseSagittarius, ishibhe kakhulu manje nelanga elise-Aquarius ngakho-ke isidingo sokuphuma sijabulele impilo futhi sihlangane ngoLwesihlanu bese uyakhungatheka.
NgoLwesihlanu kusihlwa ngenxa yeVenus Saturn, kodwa ngoMgqibelo uVenus wezenhlalo usuka kude nesibambiso sikaSaturn kepha ucindezela u-Uranus ovukelayo ngakho-ke kufanele uqaphele. IMercury ekubuyiseleni emuva, awukwazi ukuqaphela, kungenzeka ukuthi wakha izintaba emaphethelweni emvukuzane. Lokho kuvame ukubuyiswa kabusha ngeMercury nakuVenus Uranus wena, uh, abantu abaningi kanye nayo neNyanga eSagittarius ehambayo bafuna ukuphuma ngempela bagubhe futhi bagubhe futhi babe nesikhathi esimnandi, kepha kufanele uziqhelelanise nomphakathi.
Futhi izindaba ezinhle ukuthi u-Uranus ubusa u-Aquarius futhi lapho ngithe khona uVenus wangena ku-Aquarius futhi ungaba nemihlangano eminingi ebonakalayo nabangani nabathandekayo. Uyazi - iphathi enkulu endala. NgeSonto, inyanga ayinalutho njengoba siqala usuku ngakho-ke amandla acwebezela, awasabonakali, angacabangi futhi abuyiselwe eMercury nenyanga kuze kube ngu-12: 52 ntambama.
Isikhathi Esivamile sasePacific, awufuni ukwenza noma ukuqala noma yiziphi izinqumo ezintsha ezibalulekile Amaphrojekthi amasha amakhulu ngoba amandla akho ahlangana nodonga lokumelana. Kodwa ngo-12: 52 ntambama
Isikhathi sePacific, inyanga ishintshela kwi-pragmatic Capricorn: Kukhona lelo thoni elijwayelekile, ake sizimisele! Mhlawumbe uLwesihlanu kuya ngoMgqibelo ubenakho konke lokhu kuhlubuka nokukhungatheka, kepha manje ngeSonto neNyanga eseCapricorn yisikhathi lapho unesibopho esikhulu khona futhi uqala isonto lakho bese ulimisa ukuze ukwazi ukukhipha umthwalo wakho omningi ngoMsombuluko uhleliwe . Ngingathanda ukukukhumbuza ukuthi ngiyatholakala kuhlu lwemibuzo eyodwa ngemali encane. Ukuyi-oda, vele uye ekhasini lasekhaya le-astrologyanswers.com, chofoza ithebhu yabeluleki, skrolela phansi uze ufike egameni lami bese uchofoza egameni lami.
Ngifuna ukukubonga ngokuyivula. Ngiyethemba ukukubona ngesonto elizayo nengxenye yami elandelayo, kuze kube yileso sikhathi uhlala uphephile futhi uzolile.
Kusho ukuthini ukuzalwa ngoFebhuwari 1?
Februwari 1 Zodiac
Njengo-Aquarius owazalwa ngomhla ka-Februwari 1, ubuntu bakho buphawuleka ngokwethembeka nobuchule. Yize kunabantu abaningi abajabulela imidlalo yengqondo futhi belula iqiniso, uyakholelwa ukuthi ukwethembeka kuyinqubomgomo engcono kakhulu.
Noma ngabe uFebhuwari 2015 elingana kahle ekhasini, unyaka nonyaka udoti omncane kadoti wenyanga. Lokhu kushoda kwezinsuku, le mania yekhalenda, ilukuluku lonyaka, njengasiko lesimanje, yiphutha lamaRoma. Nayi indaba engasile yokuthi kungani uFebhuwari enezinsuku ezingama-28 ngaphandle uma kungenjalo.
URomulus, mhlawumbe-wasenganekwaneni, mhlawumbe-umsunguli wangempela nenkosi yokuqala yaseRoma, wayenenkinga. Ngenani elandayo lemikhosi, amadili, imikhosi yamasosha, nemikhosi yenkolo ukugcina ithrekhi, amaRoma ayedinga ikhalenda lokuyihlela yonke. Izazi zezinkanyezi zasendulo zazivele zinezibalo ezinembile zesikhathi esiphakathi kwama-equinox noma ama-solstices amabili elanga, kepha imvelo yanika abantu ishadi elihle, elilula likaphayi esibhakabhakeni ukugcina isikhathi, ngakho iRoma lasekuqaleni lalifana namanye amasiko amaningi, lenza ikhalenda yenyanga .
Ikhalenda leRiphabhulikhi yaseRomulan lalinezinyanga eziyishumi ezinsukwini ezingama-30 noma ezingama-31, eziqala ngoMashi zize ziphele ngoDisemba, futhi sisengabona imikhondo yalelo khalenda namuhla. Inkinga bekuwukuthi lo nyaka bekusele izinsuku ezimbalwa ukuthi kufike amasizini amane. AmaRoma ayematasa kakhulu engafi ebusika ukubala lezo zinsuku ezingama-61 nekota ezengeziwe ababezomane baqale unyaka olandelayo enyangeni entsha ngaphambi kwe-equinox yomphandle.
Empeleni akusilo uhlelo olubi, inqobo nje uma ungadingi ukuthola ukuthi yiluphi usuku oluphakathi kukaDisemba noMashi. Ngakho inkosi yesibili yaseRoma, uNuma Pompilius, wazama okuhlukile. Ngisho nezinombolo zazinebhadi eRoma lasendulo ngakho-ke uNuma waqala ukususa usuku olulodwa kuzo zonke izinyanga uLuna, uNuma wayefuna ukuthi ikhalenda lakhe lihlanganise imijikelezo yenyanga eyi-12 kodwa lokho bekungaba yinombolo efanayo ngakho wahlanganisa unyaka wakhe waba ngu-355.
UNuma uhlukanise izinsuku ezisele zaba yizinyanga ezimbili waziphina kwaze kwaphela unyaka. Ngakho-ke uFebruwari wathola izinsuku ezingama-28. Yebo, kuyinombolo elinganayo, kepha njengoba inyanga ibinikelwe ekuhlanzweni ngokomoya, amaRoma ayekela le ishelele.
Kepha njengoba yayinamandla iRoma, babengeke bakwazi ukuguqula imithetho yendawo yonke, futhi awekho kulawo makhalenda ahlanganisa noma kuphi eduze nesikhathi esisithatha ukuzungeza ilanga. Ngemuva kweminyaka embalwa izinkathi zesizini ziphume obishini nezinyanga, izinja namakati, ukuhlalisana, ukuhlanya okukhulu !! Sisebenzise lelo hlaya? Yilapho uthola khona nomuntu ongamazi. Uyabona, uFebhuwari empeleni wahlukaniswa kabili.
Izinsuku zokuqala ezingama-23 nokunye.
Unyaka nonyaka ikhalenda likaNuma eliyizinkolelo-ze lalisuka ezikhathini ngezinsuku ezingaphezu kwezingu-10. Njalo eminyakeni emibili izinsuku ezimbalwa zokugcina zikaFebhuwari zazinganakwa futhi kwengezwa inyanga yezinsuku ezingama-27 ngemuva kukaFebhuwari 23 noma 24. Ngaleyo ndlela, njalo eminyakeni emine ibingaba phakathi kwezinsuku ezingama-366 nekota okuyizinsuku eziningi kakhulu, kodwa hheyi, sifika lapho.
Udidekile? Kufanele ube nguNuma! Lolu hlelo belungasebenza, njalo eminyakeni engu-19 amakhalenda wenyanga nawolanga ajwayele ukuhlangana, ngakho-ke engeza izinyanga ezanele zokugcina izinkathi zilandelana futhi ekugcineni konke kuzozilungisa. Abezombusazwe bacele izinyanga zeqe ukunweba imigomo yabo, noma 'ukubakhohlwa' ukuze baxoshe abaphikisi babo esikhundleni. Futhi ngenkathi iRoma isempini, inyanga yeqa kwesinye isikhathi yayikhohlwa iminyaka, futhi lapho uJulius Caesar eqala ukubusa izinto zazidideka impela.
UCesari wayechithe isikhathi esiningi eGibhithe, lapho amakhalenda ezinsuku ezingama-365 ayegcwele intukuthelo, ngakho-ke wageza ngo-46 BC. Ikhalenda lenyanga le-BC Rome emseleni wamanzi lafaka ikhalenda elanga. UJanuwari noFebhuwari base bevele behlehlisiwe ekuqaleni konyaka, kanti uKesari wengeza izinsuku eziyishumi ezinyangeni ezehlukene ngesamba esingu-365.
Futhi njengoba unyaka oshisayo ubude bude kunezinsuku ezingama-365, uJulius wengeza usuku lokugxuma njalo eminyakeni emine, ngaphandle kokuthi bangeze ngemuva kukaFebhuwari 23, maphakathi nenyanga. Ngokusobala uFebhuwari uyinqwaba kadoti wekhalenda, yenza nje lokho okuzwa kukuhle. Kuwo wonke umsebenzi wabo wokuguqula ikhalenda nezinye izinto abazenzile, izinyanga ze-7 nele-8 zonyaka zaqanjwa kabusha kwathiwa nguJulius kanye nowangena esikhundleni sakhe u-Augustus Casar, yize uPapa uGregory kwakuzodingeka ayiphinde ayilungise eminyakeni eyi-1 500.
Kepha leyo yindaba yolunye usuku. Noma inyanga. Angisazi nokwazi.
Hlala ufuna ukwazi.
Hlobo luni lobuntu oluyi-Aquarius?
Laboowazalwa ngoFebhuwari 1I-Zodiac ivame ukuba ngabantu abanamakhono amaningi abenqabayo ukuhambisana nezindlela zendabuko zokucabanga noma zokwenza izinto. Le nhlanganisela eyingqayizivele yokuvela, umuzwa nokuzivumelanisa nezimokusholabo bantuezelwengalolu suku unekhono lokuheha nokugcina impumelelo.
Izimpawu zezinkanyezi, ukufundwa kwezinkanyezi, nezilwane ohlangana nazo kakhulu kuyahambisana. Kepha kungakanani okuyiqiniso? Hheyi ababukeli futhi wamukelekile emuva kwenye indatshana! Wake wazibuza ukuthi uyisiphi isilwane ngokwesibonakaliso sakho se-zodiac? Uyayithanda, mhlawumbe ungahlangana nezinye zezinto zayo. Ungase futhi uzizwe usondelene nabanye babo kunabanye.
Akumangalisi njengoba sivame ukufuna izici zethu ezilwaneni zethu esizithandayo. Izimpawu ze-Zodiac zivame ukufanekiselwa isilwane. Zimelela ubuntu bakho, izici zakho, nemizwa yakho ejwayelekile.
Ngabe ucabanga wena njengokhozi? Inyoka? Impisi ebabazekayo? Noma isikhova esidala esihlakaniphile? Hlala ubukele ukuthola! 1. Ama-Aries Uma ubona uphawu lwama-Aries lumele i-Aram, okusho umlilo, amandla, namandla. Iqhutshwa ngothando, ukwethembeka, nezindima zobuholi, kungenzeka ukuthi isilwane onaso Uzikhomba kakhulu.
Ungakwazi noma ungazi lokhu, kepha oklebe bangesinye isilwane okungenzeka ukuthi wabelane ngezici. Njenge-hawk, i-Aries ingumholi ozelwe. Muhle ngamaqembu, kepha akakwazi ukumiswa lapho esebenza yedwa.
Waziwa ngomoya wakhe ovuthayo, umfutho nokuzazisa ngokuphelele ngobuntu bakhe obukhulu bokuzethemba, ukubukela nokuheha. Ingabe ungama-Aries noma kukhona umuntu omaziyo? Ingabe uklebe ukhetho olulungile? Sitshele konke ngakho kumazwana angezansi. 2.
I-Taurus: I-Taurus ingenye yezimpawu ezinamandla kakhulu ze-zodiac. Kuhlanganiswe nokukhiqiza kanye nokushayela, umuntu weTaurus uyasebenza, uyavelela, futhi uzimisele kakhulu. Iyaziwa ngokuzinza kwayo okufana nenkunzi nokuqina.
Ngakho-ke inkunzi isilwane esifanele wena! Uhamba kancane, kancane, ebuka konke okuzungezile. NjengeTaurus, izimfanelo zakho ezimbili ezinhle kakhulu ukubekezela nokuphikelela. Ungaphikelela kakhulu lapho unenhloso engqondweni.
Lapho ubhekene nobunzima, esikhundleni sokwethuka, uyazi, linda ngokuthula futhi ngenhloso enkulu uqale phansi futhi ukuthula, konke ngaphandle kokukhathala futhi ngaphandle kokuchitha isikhathi njengeTaurus! 3. Abantu abangamawele abazalwa ngamawele baletha imizwa yehlobo! Njengesikhathi sonyaka, ziyadlala, zinempilo, futhi zigcwele umbala; Baziwa futhi ngokusebenza ngokuzikhandla emphakathini kanye nangokwazi ukwazi ngenkathi balinganisa impilo yabo, izinto abazithandayo, umsebenzi wabo nabangane. Akufanele kusimangaze ukuthi inyamazane isilwane esiphelele esingazikhomba kuso.
Ngokufana nozakwabo abangabantu, izinyamazane ziyajabulisa futhi zinomdlandla ogcwele umdlalo futhi azesabi ukuzibonakalisa. Njalo ubheke isixuku, bangabaqali bezingxoxo ezinhle. Bayakujabulela ukuba sesimweni somphakathi nokuxhumana nawo wonke umuntu.
Izinyamazane zingaba futhi abangane abathandekayo nabashukumisayo ukuba babheke kubo. 4. Umdlavuza: Uphawu lweCancer sun lumelwe ngophawu lwesi-Arabhu.
Kodwa-ke, isilwane esihambisana nomdlavuza singunogwaja! Kulungile. Abantu abangaphansi kokuzalwa nalesi sibonakaliso selanga, banamahloni futhi mhlawumbe banamahloni amancane, kepha futhi bahlakaniphile futhi banobuhlakani. Onogwaja basifundisa ukugqobhoza ukwesaba kwethu kunokuba sikhungatheke yibo.
Umdlavuza ngabantu abayindida kakhulu abanobuntu obumibalabala. Ukugxumela ezixazululweni ezinhle kakhulu ibhizinisi lakho. Vele uzozizwa ukhungathekile futhi ungavikeleki ngezinye izikhathi, kepha ikhono lakho lokucabanga ngaphandle kwebhokisi likwenza uqine futhi usheshe. 5.
U-Leo Leo ngokwezwi nezwi usho ingonyama. Waziwa ngentshiseko yakhe enomdlandla kanye nokukwazi ukubhukuda ngokumelene nesikhathi samanje, abantu abazalelwe ngaphansi kwalesi sibonakaliso bamele amandla, ukukhuthazela nokuba nesibindi. Akumangazi ukuthi isilwane esihlotshaniswa nalesi sibonakaliso se-zodiac udrako.
Ziwuphawu lobuholi kanye nekhono. Lezi yizici ezimbili zobuntu uLeo abantu abalwela ukuzenza ezimpilweni zabo zobungcweti nezangasese. Njengodrako, uLeo muhle futhi ubabazekile, ubukhona bakhe nje bushiya isithombe sendawo abahlala kuyo.
Banamandla, banesibindi futhi bahlala bekulungele ukulwela okubaluleke kakhulu. 6. IVirgo Impungushe ingenye yezilwane izintombi ezingakhomba ngazo.
Babelana ngezici eziningi ezifanayo, enye yazo yikhono labo lokuzivumelanisa nendawo ebazungezile. Lokhu kuzenza zibe ezinye zezidalwa eziguquguqukayo kakhulu emhlabeni. Yize bancane, bakwenzela lokhu ngamandla abo engqondo.
Impungushe nayo isho ukuthi uyahlaziya futhi uyakwazi ukuzivumelanisa nezimo. Ungakhululeka kunoma yisiphi isimo. Kwesinye isikhathi lesi silwane sinobuqili okusho ukuthi umuntu waso oyintombi nto uhlala ethola indlela yokuphuma esimweni esikhohlisayo.
Akunandaba ukuthi kubi kangakanani, ubuhlakani bakho nokuqonda kwakho kukuthola kalula. ILibra Uma ukhuluma ngeLibra, konke okufika engqondweni ibhalansi.
Kungakumangaza ukuthi i-Animal yakho igwababa! Bayadlala, bahlakaniphile futhi banobuciko endleleni yabo yokuphila. Njengabagqugquzeli abaphelele kunoma yiliphi iqembu, bangabanxusa kakhulu okubenza babe ngabalaleli abakhulu nabeluleki. Futhi zinamandla angenamkhawulo futhi zilula ngendlela emangalisayo kubo bonke ubudlelwano bazo.
Ngaphakathi, zinothando, ziyabekezela futhi ziyakhathala. Uma bengeyena umuntu wakho ojwayelekile obukekayo, bangabonakala njengabantu abanamahloni, abafuna ngenkani, futhi abadelelayo. Kepha kukonke, banakekela kakhulu futhi bayathanda ukunikela ngesikhathi nenhliziyo yabo. 8.
IScorpio Scorpios sinemizwa, siyacabanga futhi sinamandla. Abantu abaningi benza iphutha ngeScorpio njengophawu lomlilo, kepha amandla abo, uthando lwabo, nezinga labo elingokomzwelo libenza babe yi-watermark. Akumangazi ukuthi isilwane osikhomba kangcono yinyoka.
Banikeze injongo futhi bangashintsha umhlaba - akukho ukubamisa. Zimele uguquko empilweni yomuntu. Ngokwamasiko amaningi, ukuxebuka kwesikhumba kuwuphawu lomjikelezo wokuphila-wokuzalwa kabusha.
Laba bantu bakholelwa ekuphishekeleni ukukhula futhi ngemuva kwesikhashana bazobuyela ebhodini lokudweba futhi bafune ukwakha kabusha izimpilo zabo. Uthatha izinselelo zokushintsha impilo entsha ushiye ezindala ngemuva. Intando yakho yokuzithuthukisa yilokho okwenza uhluke.
Izimpawu ze-Zodiac zingakusiza ukuthi uthole izithandani ezifanele. Bheka izimpawu zezinkanyezi ezenza imibhangqwana ephelele. Ingabe ungomunye wabo? Manje buyela ezinhlotsheni ezenza imibhangqwana ephelele Kususelwa kusibonakaliso sakho se-zodiac. 9.
I-Sagittarius: Uma Ifika I-Sagittarius iyisibindi, inothando inothando, ubuhlakani, futhi iyahlekisa! Zonke lezi zimfanelo zobuntu ndawonye zenza isikhova esidala esihlakaniphile sibe yisilwane sakho. Njengesikhova, abantu abazalwa ngaphansi kwalesi sibonakaliso banake kakhulu. Ungabheka kubantu ukuze ubone iqiniso elilele ngale kwalezi zingqimba.
Njengoba zihamba kalula, zibazisa ubudlelwano ngaphezu kwakho konke okunye. Okubi kakhulu ukuthi isikhova singabhekwa njengobudedengu, esingathembekile noma esinobugovu. Indawo abanganakekelwa kuyo, bavikeleke futhi bathandwe yinto abayilangazelelayo.
Zizwela ngokumangazayo yize bezimele. Laba bantu bayachuma ezindaweni eziningi zomsebenzi, kepha bahle kakhulu njengothisha, abaculi, noma eminye imisebenzi ebavumela ukuthi basebenzise izandla zabo. 10 ICapricorn: Imantra eyinhloko ye-Ca pricorn eyazalwa ukuthi bazofinyelela noma yini, uma nje bengagxila phezu kwakho.
Bangabantu abasebenza kanzima nabahlakaniphile abathanda ukulawula ngokuphelele ikusasa labo. Isilwane esihambisana nalesi sibonakaliso somhlaba yihansi elihle. Yize besebenza kanzima futhi befuna ukuvelela, ngokwemvelo bafana kakhulu nehansi.
Bazibekela imigomo yabo futhi balwela ukudlula konke. Bangakwazi ukuguquguquka kusuka bodwa ukuya ezimvemvane zenhlalo kalula. Bayazifela, bayajabulisa futhi banesandla ngesikhathi nangethalente labo ihansi kumele liqaphele ngoba esimweni esibi kakhulu, bavame ukuthuthukisa imikhuba yokuphoqelela noma ngisho nezici zokulutha. 11 I-Aquarius Ukudlala, ukudala nokukhalipha ngamanye amagama okusiza ukuchaza ubuntu bemvelo eyi-quirky yokuzalwa ka-Aquarius ye-otter.
Uyajabula ngalokho oyikho futhi akunandaba ukuthi abanye bacabangani ngawe. Ujwayele ukuhamba ngendlela yakho, noma kungathandeki. Unabangane abaningi abavela ku-vario nezingxenye zokuphila.
Ungasebenzisa iso lakho lengqondo ukugcina izinto zithakazelisa. Esimweni esibi kakhulu, i-otter ingaba yindlalifa ngokuzihlukanisa nabangane noma umndeni. Kepha endaweni efanele, bangumngane ophelele noma umngane. 12.
Ama-Pisces Pisces abaphuphi nabacabangayo bazo zonke izimpawu zezinkanyezi. Njenge-watermark futhi ifanekiselwa yinhlanzi, zizwela kakhulu futhi zijule kakhulu kunalasha yemizwa ngaphakathi kwemizwa. Lezi nazo ziyizici zobuntu zempisi.
Yaziwa ngokuba nentshisekelo futhi inemizwa ejulile, impisi izimele kakhulu futhi ingachitha isikhathi esiningi sempilo yayo ngenjabulo iyodwa. Esimweni esibi kakhulu, impisi ingangenwa abangane noma amalungu omndeni, ingaphazamiseki, ize iziphindiselele. Kepha uma izinto zihamba kahle banakekela ngendlela eyisimanga, banomusa futhi banothando olukhulu.
Umgomo wakho wokugcina empilweni akukhona nje kuphela ukuthola uthando lweqiniso, kepha ukulukhulisa impilo yakho yonke. Ngabe ufanisa isilwane ngokuya ngophawu lwakho lwe-zodiac? Ingabe uyi-otter, impisi, noma uklebe? Sazise kumazwana angezansi!
Ngabe uFebhuwari 1 uyisikhwama?
I-AQUARIUS(JANUARY 20 FEBRUARY 18) INFP: Abantu abazalwa ngaphansi kwe-I-Aquariusuphawu luvame ukuzidela futhi luhlakaniphe. INFPizinhlobo zobuntuaziwa futhi ngalokhu kuthembeka okungapheli kanye nemibono, yingakho laba bobabili bengamabhangqa emvelo.30. 2017.
Buyini ubuntu bukaFebhuwari?
Abantu abazalwa phakathiFebruwari1 futhiFebruwariAbangu-18 bazalwa ngaphansi kophawu lwenkanyezi u-Aquarius, kanti labo abazalwa ngokuhamba kwenyanga bangaphansi kwePisces. Ama-Aquarians avame ukubhekwa njengabacabangi basekuqaleni nabathuthukayo abanemizwelo eqinile yokusiza abantu, kuyilapho amaPisces evame ukuba nesihawu nobuciko.Isine. 2019.
Kungaba yi-Aquarius noma iPisces. Abantu abazalwa phakathiFebruwari1 futhiFebruwariAbangu-18 bazalwa ngaphansi kophawu lwenkanyezi u-Aquarius, kanti labo abazalwa ngokuhamba kwenyanga bangaphansi kwePisces.Isine. 2019.
Ngabe uFebruwari yinyanga enebhadi?
Ngoba amaRoma akholelwa ukuthi izinombolo zikhonangeshwa, ngamunyeinyangaibinezinsuku eziyinqaba, ebezishintshana phakathi kuka-29 no-31. Kepha, ukuze ifinyelele ezinsukwini ezingama-355, eyodwainyangabekufanele kube yinombolo elinganayo.Februwariwakhethwa ukuba abe ngu-inyanga enebhadingezinsuku ezingama-28.
Ingabe u-Aquarius uqabula kahle?
I-Aquarius. Ukuqabula anI-Aquariuskuyinto engafani nenye. Lolu phawu olunamanzi luyinto efudumele, evusa inkanukooqabulayoongesabi ukuthola okungajwayelekile nokungahlani nabalingani babo.5. 2017.
Ngubani okufanele ashade no-Aquarius Pisces cusp?
Lesi sici sembuzi siyenza ibe yisikhonzi esifanele thinaukukhuphuka, ngoba ubukhona beCapricornkuthandanikeza ukuthambekela komoya / okunamanzi kwalokhuukukhuphuka, indawo eqinile yokubambelela kuyo. Bobabili bayakwazisa ukuzibophezela futhi bahlonipha ubungcwele bobudlelwano. Lezi zimiso ezinengqondo zenza ukuthi laba ababili basondelane.
Ziyini izimpawu zezinkanyezi zangoFebhuwari 1?
FEBRUARY 1 usuku lokuzalwa komuntu ngesikhathi sokuzalwa komuntu lubikezela ukuthi uyakwazi ukudala! Uphawu lwe-zodiac lwangoFebhuwari 1 yi-Aquarius, futhi uthembekile ephutheni. Ukholelwa ngokweqiniso kulokho okuzwayo. Ubuntu bosuku lokuzalwa lukaFebhuwari 1 bangabantu abaqondile noma abaqondile. Udinga ukuba nobudlelwane nabantu.
Uhlobo luni lomuntu oluzalwa ngoFebhuwari 1?
Februwari 1 Zodiac. Njengo-Aquarius owazalwa ngoFebhuwari 1, ubuntu bakho buphawuleka ngokwethembeka nobuchule. Yize kunabantu abaningi abajabulela imidlalo yengqondo futhi belula iqiniso, uyakholelwa ukuthi ukwethembeka kuyinqubomgomo engcono kakhulu. Kukho konke ukusebenzelana kwakho, ngobungcweti nangokomuntu siqu, uthatha indlela eqondile nevulekile.
Liyini ithoni yokuzalwa yenyanga kaFebhuwari?
I-Amethisto yitshe lokuzalwa elichazwe ngoFebhuwari 1 futhi lilonke ngabomdabu base-Aquarius. I-Amethyst yinto eyigugu ekhombisa ukulinganisela namandla angaphakathi. Leli tshe lokuzalwa le-zodiac lingasetshenziswa kuzesekeli namasongo.